Hetsika tany amin'ny Faritra - Nisy koa ny fandrobana, olona 29 no maty - Blog de madanews
Hetsika tany amin'ny Faritra - Nisy koa ny fandrobana, olona 29 no maty
Miitatra any anivon'ny faritra ny tolona ho an'ny demokrasia sy ny fahalalahana. Tanàna maromaro teto Madagasikara no nisehoan'izany, ka nisy ihany koa ny fandrobana ny Tiko sy ny Magro ary mangazay sy orinasa hafa. Nandray andraikitra ny mpitandro filaminana ka nisy ny maty voatifitra. Tafakatra 29 izany omaly ka Toamasina sy Toliary no tena nafampana.
Nisy ny filaharambe notarihin'ny filohan'ny antoko Toamasina Tonga Saina, Roland Ratsiraka tany an-dRenivohitr'i Betsimisaraka. Niainga teo amin'ny tranon-jiro Ankirihiry izany ary tafapaka tany amoron-dranomasina. Nanodidina tamin'ny 12 ora no nanomboka ny filaharana ary tamin'ny 3 ora mahery kely no nifarana ny fihetsiketsehana teny amoron-dranomasina. Nisy ny fandrobana mangazay sy ny Magro taorian'izany ka nitifitra ny mpitandro filaminana. Vokany olona 2 no maty ary mihoatra ny 30 no namoy ny ainy.
Roa lavon'ny bala
Araka ny vaovao voaray avy any Toamasina, dia nizara nanao andiany telo ireo mpilahatra rehefa nirava ny fivoriana nataon'izy ireo teny amoron-dranomasina. Nisy ny nizotra tany Tanambao II ka nandroba ny tranombarotra «Dinh Van » mpivarotra finday. Nanomboka teo dia nitohy tany amin'ny toerana maro izany fandrobana izany. Anisan'ireny ny tranombarotry ny Karàna ao Bazary Be. Tamin'ny 3 ora sy sasany tany ho any no notafihina andian'olona ny Magro manoloana ny « Gare routière » . Teo no nitifitra ny mpitandro filaminana ka tovovavy 17 taona sy lehilahy 45 no maty tamin'izany. Tsy nisy niainga ny entana tao anatiny ary fiara kamiao lava rambo sy kamio misy vata fampangatsiahana no may tamin'izany. Nisy nandroba sy nandoro ihany koa ny biraon'ny Bianco ao amin'ny toby miaramila Gallieni.
Omaly tamin'ny 7 ora hariva dia nizotra nihazo ny Magro Morafeno ireo andian'olona mpandroba. Mihatra any Toamasina araka izany ny tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina manomboka amin'ny 10 ora. Niantso fitoniana ho an'ny vahoaka ny tomponandraiki-panjakana any an-toerana, ary efa miditra an-tsehatra amin'ny fampandriana fahalemana ny mpitandro filaminana any Tomasina.
Sava sy Diana
Nivadika ny tolona
Raha ny vaovao azo avy any an-toerana, dia nivadika ny endriky ny tolona any Sambava sy Antsiranana. Rehefa avy nandoro ny tranombarotra Tiko any an-toerana ny andian'olona tsy fantatra, dia ny « Merina » indray no natao hazalambo roahina hiala any an-toerana. Araka ny vaovao azo ihany, dia efa miala tsikelikely any an-toerana ireo manan-katao. Roa no maty tany Sambava ary may ihany koa ny « Mbs», any an-toerana .
Telo no namoy ny ainy
Olona telo no namoy ny ainy tao an-dRenivohitr'i Boina omaly tamin'ny 7ora sy 50 mn. Vokatry ny fifanosehana tamin'ny fandrobana no nahatonga izany. Nanomboka tamin'ny sivy ora sy sasany maraina izany fandrobana izany. Rehefa avy nandroba sy nandoro ny Magro tao Mahajanga Be ny andiana tanora, dia nihazo ny tranombarotra
« Score » sy izay mangazay nanodidina teo. Nasesiny indray koa ny tranombarotr'ireo Karàna tany an-toerana. Mivezivezy amin'ny fitaomana entana an-dalambe ireo mpangalatra ireo.
Tranombarotra roa kila forehitra
Kilan'ny afo ihany koa ny Magro sy ny Shoprite any Antsirabe omaly. Nodoran'ny vahoaka daholo ireo tranombarotra roa ireo. Tsy nisy ny aina nafoy fa ireo naratra no betsaka.
Vanila 20 kaotenera may
Tsy namelan'olon-tsy fantatra ihany koa ireo kaontenera miisa 20, misy vanila any Vohémar omaly. Araka ny vaovao azo avy any an-toerana, dia kila forehitra avokoa ireo rehetra ireo.
Olona 22 maty voatifitra
Vokatry ny fidinana an-dalambe tao Toliara omaly, dia nahatratra 20 ireo maty voatifitry ny basy ary vazaha roa hafa no maty voahitsaky ny olona tamin'ny fandrobana ny tranombarotra Tiko. Voatery nampiasa fitaovam-piadiana ny mpitandro filaminana noho ny fandrobana ataon'ireo mpanararaotra. Vao nidoboka ny teto an-dRenivohitra dia nipoitra koa ny tany amin'ny Faritany tamin'ity hetsika fitakiana demokratika ity. Famakiana tranombarotra maro no nisy tany an-toerana, ka rehefa nandray ny andraikiny ny mpitandro filaminana, dia nisy ny fifandonana izay niafara tamin'ny fampiasan-kery sy fitifirana nataon'ny EmmoNat. Eny amin'ny hopitalibe ao Toliary no misy ny razana amin'izao fotoana izao. Ny nahagaga dia ny fahafantarana fa voatonontonona amin'ity fandrobana ity ny anaran'ny tomponandraikitra mpanao politika teo aloha. Tsy mbola fantatra izay tohin'ny tantara taorian'izay fifandonana izay, fa na ny raiamandreny amin'ny Ffkm na ny Filohampirenena na ny Ben'ny tanàna, dia samy niantso ny vahoaka rehetra mba ho tony.
# Posté le mercredi 28 janvier 2009 00:34